အပျက်အပျက်နဲ့ နှာခေါင်းသွေးထွက်ဆိုသလိုတော့ ဖြစ်လာပါပြီ။ ကျနော်တို့ရဲ့ မိသားစုတိုင်းရင်းသား ရခိုင် မျိူးနွယ်စုများခင်ဗျား. - MM Live News
အပျက်အပျက်နဲ့ နှာခေါင်းသွေးထွက်ဆိုသလိုတော့ ဖြစ်လာပါပြီ။ ကျနော်တို့ရဲ့ မိသားစုတိုင်းရင်းသား ရခိုင် မျိူးနွယ်စုများခင်ဗျား.
အပျက်အပျက်နဲ့ နှာခေါင်းသွေးထွက်ဆိုသလိုတော့ ဖြစ်လာပါပြီ ကျနော်တို့ရဲ့ မိသားစုတိုင်းရင်းသား ရခိုင် မျိူးနွယ်စုများခင်ဗျား.
AA ဆိုတာ ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တွေသူကောင်းပြု ခံရချိန်ကျမှ ခါတော်မီ ထပေါ်တဲ့ လက်နက်ကိုင် သောင်းကျန်းသူပါ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ ကိုယ်သူတို့ ရခိုင် တပ်မတော် Arakan Army AA ဆိုပြီး ရခိုင်လူမျိူးအားလုံးကိုဘဲ ကိုယ်စားပြုသယောင်ယောင် ဖွဲ့စည်းပြီး ရခိုင်လူမျိး တို့ရဲ့လွတ်လပ်ရေး အတွက်တိုက်ပွဲဝင်မယ် ဆိုပါတယ်
ကျနော့် အဖိုးဟာ ရခိုင်အစစ်ပါ ရခိုင်ပြည် ရခိုင်လူမျိူးတွေဟာ သမိုင်းအစဉ်အဆက် လွတ်မြောက်ပြီးသားပါ
ညီအကိုတော် ရခိုင်အမျိူးသားများ သေချာစဉ်းစားကြည့်ကြပါ ကျနော်တို့မြန်မာ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ရင်ထဲမှာ ဒီနေ့အကြီးကျယ်ဆုံး အပူမီးဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ဘင်္ဂလီတွေကျူးကျော်ပြီး ရခိုင်ပြည်ဆုံးရူံးမဲ့အရေးပါဘဲ။
တစ်ပြည်လုံးက ဝိုင်းပြီးရခိုင်ပြည်နယ် မကျဆုံးရေးအတွက်ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ကျိူးစားနေတဲ့အချိန်မှာ AA ဟာ ကိုယ့် ရခိုင်လူမျိူးတွေ ဘက်က မကာကွယ်ဘဲနဲ့ ရခိုင်အမျိူးသားများ လုံခြုံရေးအတွက်တာဝန်ယူထားတဲ့ ရဲစခန်း လေးခုကို ရက်ရက်စက်စက် ဝင်ပြီး အသေသတ်ဖြတ်တဲ့လုပ်ရပ်ကတော့ ကိုယ့်ရခိုင်လူမျိူးတွေအပေါ် မှာ အင်မတန်မှယုတ်မာတဲ့လုပ်ရပ်ပါဘဲခင်ဗျာ။ အဲဒီရဲစခန်းတွေဟာ ARSA တွေ ရခိုင် တွေကို မသတ်ဖြတ်နိုင်အောင်လို့ ကာကွယ်ပေးတဲ့တာဝန်ယူထားတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေပါ။ ချင်းလူမျိူးတွေ ဗမာလူမျိူးတွေ ကျဆုံးရပါတယ်။
ရခိုင်လူမျိူးဟာ ကိုယ့်အမျိူးကို ချစ်တဲ့စိတ် အင်မတန်ပြင်းထန်ပါတယ်။ ဒါဂုဏ်ယူစရာပါ။ ဘယ်ရခိုင်မှ ကုလားကို လက်မထပ်ပါဘူး။ အခု AA နေ့ချင်းညချင်း ကြီးထွားလာတာ အဲဒီမျိူးချစ်စိတ်အခြေခံ နဲ့ ရခိုင်လူမျိူးတချိူ့ AA ရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးစကားကိုနားယောင်ပြီး လူအားငွေအားပံ့ပိုးတာလို့ကျနော်ထင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့နဲ့ မိတ်ဆွေ ရခိုင်လူမျိူးတို့ဘယ်တုန်းကများ ခိုက်ရန်ဖြစ်ဖူး ကြပါသလဲခင်ဗျာ။ နှစ်ရာထောင်ချီတဲ့မဟာမြတ်မုနိ ကိစ္စကတော့ ကျနော်တို့လဲ ဘယ်တတ်နိုင်ပါ့မလဲခင်ဗျာ။ ရခိုင်မိတ်ဆွေတို့ထက် ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေ ဘယ်နေရာမှာများပိုပြီးအခွင့်အရေး ယူခဲ့ဖူးပါသလဲခင်ဗျာ။
ရခိုင်လူမျိူးဟာတော်ပြီဆိုရင် အစွမ်းကုန်တော်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ရခိုင်မှာမနေတော့ပါဘူး။ သူတို့အရည်အချင်းနဲ့ တွက်ရင် အရမ်းနိမ့်တဲ့ ဒေသဖြစ်တော့ မြန်မာပြည်တောင်မက နိုင်ငံခြားသွားနေကြပါတယ်။ အဲလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်း လူတော်ရခိုင်တွေ နည်းပါးလာပြီး ဘင်္ဂလီတွေရဲ့ကျူးကျော်စော်ကားသတ်ဖြတ်မှူကို ခံနေကြရပါပြီ။ ကျနော်တို့တိုင်းရင်းသား အားလုံးဟာ တပ်မတော် အပါအဝင် ရခိုင်ပြည်နယ် ရခိုင်လူမျိူးတွေအတွက် အသက်နဲ့ရင်းပြီး ကာကွယ်ဖို့အဆင်သင့်ရှိနေတဲ့ အချိန်မှာ AA က ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားများအပေါ် ယုတ်မာချက်ကတော့ အင်မတန်ရင်နာစရာဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍သာ AA ဟာ ARSAကို၊ဘင်္ဂလီသောင်းကျန်းသူတွေကို တိုက်ခိုက်ပေးခဲ့ရင် ရခိုင်တစ်မျိူးသားလုံး AA ကိုထောက်ခံပါ။ ကျနော်လဲထောက်ခံပါ့မယ်။ကျနော် ဒီနေရာကနေ ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများကို အထူး တင်ပြချင်တာက AA ရဲ့ လုပ်ရပ်ကို သေချာ ကြည့်ပြီးမှ မိမိတို့ ရခိုင်ဘက်ကရပ်တည်သလား ARSA ဘက်ကရပ်တည်သလားဆုံးဖြတ်ကြပါ။ ရခိုင်နဲ့ကျနော်တို့တိုင်းရင်းသားများ အကြားမှာ ဘာအမုန်းအာဃာတမှမရှိပါ။AA ကို မထောက်ခံသော ရခိုင်လူမျိူးများစွာရှိတယ်ဆိုတာလဲ သိပါတယ်။
လူအောက်တန်းစားတွေ FB ပေါ်မှာ ဆဲဆိုနေတာလဲ လျစ်လျူ ရူပြီး ကျနော်တို့တိုင်းရင်းသား အားလုံး လက်တွဲပီး ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုကာကွယ်ကြပါစို့ခင်ဗျာ။
credit ဇေစိုး ref; #တာတေ (စနေသား)
အပကျြအပကျြနဲ့ နှာခေါငျးသှေးထှကျဆိုသလိုတော့ ဖွဈလာပါပွီ ကနြျောတို့ရဲ့ မိသားစုတိုငျးရငျးသား ရခိုငျ မြိူးနှယျစုမြားခငျဗြား.
AA ဆိုတာ ဒီမိုကရစေီခတျေမှာ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျ တှသေူကောငျးပွု ခံရခြိနျကမြှ ခါတျောမီ ထပျေါတဲ့ လကျနကျကိုငျ သောငျးကနျြးသူပါ။ ဒါပမေဲ့ သူတို့ ကိုယျသူတို့ ရခိုငျ တပျမတျော Arakan Army AA ဆိုပွီး ရခိုငျလူမြိူးအားလုံးကိုဘဲ ကိုယျစားပွုသယောငျယောငျ ဖှဲ့စညျးပွီး ရခိုငျလူမြိး တို့ရဲ့လှတျလပျရေး အတှကျတိုကျပှဲဝငျမယျ ဆိုပါတယျ
ကနြေျာ့ အဖိုးဟာ ရခိုငျအစဈပါ ရခိုငျပွညျ ရခိုငျလူမြိူးတှဟော သမိုငျးအစဉျအဆကျ လှတျမွောကျပွီးသားပါ
ညီအကိုတျော ရခိုငျအမြိူးသားမြား သခြောစဉျးစားကွညျ့ကွပါ ကနြျောတို့မွနျမာ တိုငျးရငျးသားတှရေဲ့ရငျထဲမှာ ဒီနအေ့ကွီးကယျြဆုံး အပူမီးဟာ ရခိုငျပွညျနယျကို ဘင်ျဂလီတှကြေူးကြျောပွီး ရခိုငျပွညျဆုံးရူံးမဲ့အရေးပါဘဲ။
တဈပွညျလုံးက ဝိုငျးပွီးရခိုငျပွညျနယျ မကဆြုံးရေးအတှကျကိုယျတတျနိုငျတဲ့ဘကျက ကြိူးစားနတေဲ့အခြိနျမှာ AA ဟာ ကိုယျ့ ရခိုငျလူမြိူးတှေ ဘကျက မကာကှယျဘဲနဲ့ ရခိုငျအမြိူးသားမြား လုံခွုံရေးအတှကျတာဝနျယူထားတဲ့ ရဲစခနျး လေးခုကို ရကျရကျစကျစကျ ဝငျပွီး အသသေတျဖွတျတဲ့လုပျရပျကတော့ ကိုယျ့ရခိုငျလူမြိူးတှအေပျေါ မှာ အငျမတနျမှယုတျမာတဲ့လုပျရပျပါဘဲခငျဗြာ။ အဲဒီရဲစခနျးတှဟော ARSA တှေ ရခိုငျ တှကေို မသတျဖွတျနိုငျအောငျလို့ ကာကှယျပေးတဲ့တာဝနျယူထားတဲ့ တိုငျးရငျးသားတှပေါ။ ခငျြးလူမြိူးတှေ ဗမာလူမြိူးတှေ ကဆြုံးရပါတယျ။
ရခိုငျလူမြိူးဟာ ကိုယျ့အမြိူးကို ခဈြတဲ့စိတျ အငျမတနျပွငျးထနျပါတယျ။ ဒါဂုဏျယူစရာပါ။ ဘယျရခိုငျမှ ကုလားကို လကျမထပျပါဘူး။ အခု AA နခေ့ငျြးညခငျြး ကွီးထှားလာတာ အဲဒီမြိူးခဈြစိတျအခွခေံ နဲ့ ရခိုငျလူမြိူးတခြိူ့ AA ရဲ့ရခိုငျပွညျနယျလှတျမွောကျရေးစကားကိုနားယောငျပွီး လူအားငှအေားပံ့ပိုးတာလို့ကနြျောထငျပါတယျ။
ကနြျောတို့နဲ့ မိတျဆှေ ရခိုငျလူမြိူးတို့ဘယျတုနျးကမြား ခိုကျရနျဖွဈဖူး ကွပါသလဲခငျဗြာ။ နှဈရာထောငျခြီတဲ့မဟာမွတျမုနိ ကိစ်စကတော့ ကနြျောတို့လဲ ဘယျတတျနိုငျပါ့မလဲခငျဗြာ။ ရခိုငျမိတျဆှတေို့ထကျ ကနြျောတို့ တိုငျးရငျးသားတှေ ဘယျနရောမှာမြားပိုပွီးအခှငျ့အရေး ယူခဲ့ဖူးပါသလဲခငျဗြာ။
ရခိုငျလူမြိူးဟာတျောပွီဆိုရငျ အစှမျးကုနျတျောပါတယျ။ ပွီးတော့ ရခိုငျမှာမနတေော့ပါဘူး။ သူတို့အရညျအခငျြးနဲ့ တှကျရငျ အရမျးနိမျ့တဲ့ ဒသေဖွဈတော့ မွနျမာပွညျတောငျမက နိုငျငံခွားသှားနကွေပါတယျ။ အဲလိုနဲ့တဖွညျးဖွညျး လူတျောရခိုငျတှေ နညျးပါးလာပွီး ဘင်ျဂလီတှရေဲ့ကြူးကြျောစျောကားသတျဖွတျမှူကို ခံနကွေရပါပွီ။ ကနြျောတို့တိုငျးရငျးသား အားလုံးဟာ တပျမတျော အပါအဝငျ ရခိုငျပွညျနယျ ရခိုငျလူမြိူးတှအေတှကျ အသကျနဲ့ရငျးပွီး ကာကှယျဖို့အဆငျသငျ့ရှိနတေဲ့ အခြိနျမှာ AA က ကိုယျ့တိုငျးရငျးသားမြားအပျေါ ယုတျမာခကျြကတော့ အငျမတနျရငျနာစရာဖွဈပါတယျ။
အကယျ၍သာ AA ဟာ ARSAကို၊ဘင်ျဂလီသောငျးကနျြးသူတှကေို တိုကျခိုကျပေးခဲ့ရငျ ရခိုငျတဈမြိူးသားလုံး AA ကိုထောကျခံပါ။ ကနြျောလဲထောကျခံပါ့မယျ။ကနြျော ဒီနရောကနေ ရခိုငျ တိုငျးရငျးသားမြားကို အထူး တငျပွခငျြတာက AA ရဲ့ လုပျရပျကို သခြော ကွညျ့ပွီးမှ မိမိတို့ ရခိုငျဘကျကရပျတညျသလား ARSA ဘကျကရပျတညျသလားဆုံးဖွတျကွပါ။ ရခိုငျနဲ့ကနြျောတို့တိုငျးရငျးသားမြား အကွားမှာ ဘာအမုနျးအာဃာတမှမရှိပါ။AA ကို မထောကျခံသော ရခိုငျလူမြိူးမြားစှာရှိတယျဆိုတာလဲ သိပါတယျ။
လူအောကျတနျးစားတှေ FB ပျေါမှာ ဆဲဆိုနတောလဲ လဈြလြူ ရူပွီး ကနြျောတို့တိုငျးရငျးသား အားလုံး လကျတှဲပီး ရခိုငျပွညျနယျကိုကာကှယျကွပါစို့ခငျဗြာ။
credit ဇစေိုး ref; #တာတေ (စနသေား)
နာမည်ကျော် မလေးရှားကြက်တောင်ကစားသမားကို ကျော်ပြီး နိုင်ငံအတွက် ရွှေတံဆိပ်ဆုရယူပေးခဲ့လိုက်တဲ့ မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် မိန်းကလေး
နွားဖိုး ဘဲရင်းပြီး မြန်မာတောင်သူတွေကို အမြတ်အကြီးစားထုတ်သွားတဲ့ တရုတ်ရဲ့ ဗျူဟာ…